mairie-antananarivo – Jeanne d’Arc University – CUA : Sortie de promotion
Jeanne d’Arc University – CUA : Sortie de promotion
auteur 13 febroary 2017 Commentaires fermés
Notsofin-drano ny zoma10 febroary 2016 tetsy amin’ny PK0 Soarano ny mpianatra andiany ILO avy ao amin’ny Jeanne D’Arc University. Voaloham-bokatry ny Jeanne d’Arc University izy ireo ary mahatratra 36 mianadahy no notolorana mari-pahaizana licence sy DTS teo amin’ny taranja, serasera, fandraharahana ary ny infôrmatika.
Nanome voninahitra ny fivoahan’ireo andiam-pianatra avy ao amin’ny Jeanne d’Arc University ny solotenan’ny Ben’ny Tanàn’Antananarivo Renivohitra ny Colonel Emilien Ramboasalama 1er Adjoint au Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo.
Nofaranana tamin’ny fizarana fanomezana ho an’ireo mpianatra mendrika sy mari-pahaizana ary fiaraha-misakafo ny lanonana. Eny amin’ny Bel’Air no misy ny Jeanne d’Arc University ary tamin’ny taona 2014 ny niforonany.